मधेशमाथिको चरम बेइमानी Global TV Nepal
शपथग्रहण कार्यक्रममा गएनन् कमल थापा काँग्रेस महाधिवेशन बागमतीमा पुनः मतदान सुरु, इन्द्रलाई भीमसेनको साथ कमल थापाका भतिजा अभिषेकले राप्रपा केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिने नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम सभापतिमा वीरबहादुर बलायरसहित प्यानल विजयी झापामा श्रीमानको कुटपिटबाट श्रीमतीको मृत्यु भारतको नयाँ दिल्लीमा पनि देखियो ओमोक्रन भेरियन्ट जितपछि लिङ्देनले भने तपाईंहरुको शीर झुक्न दिन्नँ प्रितिबाट युनिकोड | युनिकोडबाट प्रिति
मधेशमाथिको चरम बेइमानी
ग्लोवल टि.भी. शनिबार, भदौ ५, २०७८ 0
केन्द्रिकृत सत्ताले मधेशमाथि उत्पीडन ग¥यो, भन्दै मधेश केन्द्रीत राजनीतिक गर्नेहरुको पछिल्लो दुर्दशा टीठ लाग्दो छ। मधेशमा उत्पीडनको जाँतोमा पिसिएकाहरुको मुक्तिका लागि भन्दै राजनीतिक गरेका नेतृत्व यतिबेला छिन्नभिन्न भएका छन्। यदी उनीहरुले मधेशी जनताको लागि राजनीति गरेका हुन्थे, भने उनीहरु सत्ता माखे स्वार्थले यसरी छिन्नभिन्न हुँदैनथिए होला। तर, राजनीतिलाई शक्ति र सम्पत्ती आर्जनको आधार बनाएकाले नै यी मधेश केन्द्रीत दलका नेताहरु जुट्न भन्दा फुट्नमै सक्रिय छन्।
भोटकै लागि उत्पीडनको सेन्टीमेन्टमा खेल्ने र भोट लिएर सिंहदरबार छिर्ने यी नेताहरुको चरित्र यस्तै छ। यो चरित्र हिजो पनि थियो र आज पनि उस्तै छ । यसले उनीहरुको दैनिकीमा स्वर्ग त आएकै छ। तर उनै जनताको दैनिकी भने सधै नर्क किन ? अधिकांश जनता अझैपनि गरिबी, दाइजोको कुप्रथा, जातीय विभेदसंगै बहिस्करणको जाँतामा नारकीय जिन्दगी जिइरहनुपर्ने हो र ?मान्छे मान्छे एउटै होइन र ? मधेशमा जन्मिने एउटा वर्ग सत्तामा मोजमस्ती गरिरहने , अर्काे जन्ता सधै गरिबी र अभावमा किचिरहनुपर्ने ? के यही हो त लोकतन्त्र र अधिकार भनेको ? के यहाँका नागरिक सधै यही गरिबीको दुष्चक्रमा बाच्नुपर्ने हो र ?
यहाँको असमनता र विभेदको पर्खाल यति धेरै अग्लो छ कि, जसलाई भत्काउन अझैसम्म कोही कसैले सकेको छैन । यहाँको गरिबी यति धेरै भयावह छ, कि जहाँ एक गास खान, एकसरो लगाउन र औषधि मुलो गर्न समेत धौ धौ छ । शिक्षा स्वास्थ्यको अवस्था पनि उत्तिकै भयावह छ। तर, पनि मधेशमा आफूलाई राजै ठान्ने मधेश केन्द्रीत दलका नेताले यो गरिबी र विभेद उन्मुलन गर्न किन चाहादैनन् त ? के सधै विभेद र गरिबीको सेन्टीमेन्टमा मधेशमा राजनीति गर्नका लागि हो त ? होइन, भने ४७ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीमा यसरी थिचिनु पर्ने किन ?सधै काठमाडौलाई धार्ने हात लगाएर सत्तामा बार्गेनिङले मधेशको गरिबी अभाव र विभेद अन्त्य कसरी हुन्छ त ? के मधेशका महिसा ठान्नेहरुसंग यसको चित्तबुझ्दो जवाफ छ ?
संघीयताको अभावमा मधेशले न्याय पाएन भन्ने यी नेताहरु आफै मिल्न नसक्नु कहाँसम्मको बिडम्वना हो ? यदी राजनीतिमा जवाफदेहीता हुन्छ भने, मधेशी नागरिकसंग गरेको बाचा खोइ पूरा गरेको ? चुनावको बेला स्वर्गको सपना बाँड्ने नेताहरु काठमाडौ छिरेपछि मन्त्रीका लागि यतिधेरै लुछाचुडी किन ? सत्तामा जानु दलहरुको चरित्र नै होला तर यो होइन कि मन्त्री पाउनैका लागि आन्दोलन र पार्टीलाई खरानी बनाउनेसम्मको कुकृत्य मधेशमा अब स्वकार्य छैन र हुनु हुदैन पनि ।
विघटनको चौबाटोमा कम्युनिष्ट आन्दोलन
बजेट कार्यान्वयनमा शंका नगर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह
कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवादले महाधिवेशन पेचिलो बन्दै
हालसम्म अफगानिस्तानबाट ५०४ नेपाली स्वदेश फर्किए, थप ३५६ सम्पर्कमा
ईपीएल: भैरहवा र काठमाण्डौ किङ्ग्सबीचको खेल रद्द
विदेशी हाईप्रोफाईल नै बालयौनदुराचारमा संलग्न
हाइटीका राष्ट्रपति जोभनेल मोइजको निजी निवासमा हत्या
शपथग्रहण कार्यक्रममा गएनन् कमल थापा
काँग्रेस महाधिवेशन बागमतीमा पुनः मतदान सुरु, इन्द्रलाई भीमसेनको साथ